Ọnụ ego nke nnwale weebụsaịtị n'efu | Martech Zone
Wednesday, June 13, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Nke a bụ arụmụka na-aga n’ihu na-ewe iwe ma a bịa n’ Internetntanet… gịnị kpatara m ga-eji kwụọ ụgwọ maka azịza m nwere ike iji nke nwere ego? Anyị na-eji ọtụtụ ngwa n'efu - mana nyere ahụmịhe anyị na ụlọ ọrụ ahụ, echere m na anyị bụ ndị ọzọ na iwu ahụ. Dị ka ihe gị n'ụlọnga, anyị na-n'ụzọ zuru ezu leveraging technology anyị hụrụ bara uru na-etinye ya na-arụ ọrụ na-enyere ndị ahịa anyị.
Ọtụtụ oge anyị na-ahụ ndị ahịa anyị ka ha jiri uru nke n'efu na-enweghị ihe ọmụma iji ya ma ọ bụ nghọta nke mmetụta ọ nwere na mbọ ahịa ha niile. Na nke a, ndị folks na Maxymiser ji mere nyocha nke ịkwụ ụgwọ na ebe nrụọrụ weebụ na-akwụghị ụgwọ ma chọpụta na ndị ahịa na-akwụ ụgwọ nyocha nwere 600% nsonaazụ kacha mma. Ma, nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe ijuanya. Nnukwu ikpo okwu na-enwekarị ndị ọkachamara na-enyere gị aka ịchụpụ nsonaazụ site na iji nyiwe ha. Yabụ, ọ bụ na ha mma ka ijide n'aka na ị n'ụzọ zuru ezu leverage ha ngwa nke mere na ị na-a nlaghachi azụ na ulo oru mbo. A free ngwa adịghị enye na!
Tags: ule ulennwale n'efumaxymispricelaghachi azụmaahịatestingule weebụ